Mpianatry ny Esca iray no nisy naka raha vao nilaza izy fa tsy mifoka sigara rehefa nanontanian’ireo olon-dratsy. Nilaza ho tsy nahatsiaro tena intsony izy taorian’ny famaliany an’io fanontaniana io. Teny amin’ny lalam-baovao Tsarasaotra izy no hita, telo andro taty aoriana ary tsy nisy tadidiny izay zava-niseho. Hivory ato ho ato ny fikambanan’ny ray aman-drenin’ny Esca ny amin’ny hiarovana ireo mpianatra manoloana ity tranga hafahafa ity. Tsiahivina fa marobe koa ny zaza tsy hita tato ho ato.
NAOLANA NY VEHIVAVY REHETRA
Habibiana tsy roa aman-tany no niseho tetsy Ambohijanaka. Izany dia mahakasika ny fanolanana ny vehivavy rehetra izay tao amin’ilay tokantrano. Fanafihana mitam-basy no nitranga ary rehefa azo ny vola sy ny kojakoja hafa izay nilain’ireo jiolahy dia nivadika tamin’ny fanolanana amin’izay. Fito lahy mitazona kalachnikov no tompon’antoka ary vola mitentina iray tapitrisa mahery no lasa nandritry ny fanafihana. Ambohijanaka koa dia matetika hiverenan’ny jiolahy ary amin’ny dimy ora hariva dia efa maty tanteraka ny tanàna noho ny horohoron’ny mponina eny.
MIRONGATRA NY TRAFIKA
Feno trafika ao amin’ny seranan-tsambo sy seranam-piaramanidin’Ivato. Ny iray dia mahakasika ny héroine milanja dimy kilao izay tao anaty sambon’ny kaompania iray. Ny faharoa kosa indray dia tao amin’ny seranam-piaramanidina ary mahakasika ny fanondranana volamena milanja 25 kilao nataon’ny teratany karàna iray. Ireo zava-misy ireo anefa dia afinafenin’ny manampahefana, indrindra ny ladoany. Ana miliara ariary maro ny tentim-bidin’ireo ary heloka bevava, ka tokony hatao mangarahara ny fikirakiràna ny fanenjehana ary hampahafantarina ny vahoaka.
FANDROBANA TENY ANOSIALA
Jiolahy miisa fito mitondra basim-borona sy sabatra no nandroba tetsy Anosiala Ambohidratrimo. Lasa ny vola mitentina 200.000ariary ary finday miisa dimy. Mba tsy nisy ny aina nafoy na koa ny naratra satria tsy nisy namaly ny tao an-trano raha vao nahita ireo fitaovam-piadiana teny an-tananan’ireo olon-dratsy. Isan’ny faritra mena eto an-drenivohitra ankehitriny Ambohidatrimo sy ny manodidina azy. Misy fanafihana mitam-piadiana hatrany isan-kerinandro. .
LALANA SIMBA LASA FANARARAOTANA
Lasa fanararaotan’ireo tsy misy asa ny fahatapahan’ny lalana etsy 67ha afovoany. Misy ny manisy vato izay hahafahan’ny fiara avo mihetsika ary koa ny moto sasantsasany. Izany anefa dia handoavam-bola. Raha tsiahivina dia noho ny fahavakisan’ny fatson-drano iray an’ny Jirama no antony nahatonga ny ranobe sy ny lavaka be. Goaka tanteraka ny lalana ary na ireny sprinter avo be ireny aza dia tafalatsaka teo afovoany ka tsy afa-nikisaka. Nefa ny Jirama dia eo akaiky eo ihany no misy azy.
Lasa ivontoeran’ny herisetra ankehitriny ireny toerana fanaovana karaoké ireny. Tetsy 67ha dia niafara tamin’ny fahafatesana izany. Ny olana dia satria nitovy ny hira izay nataon’ny andian’olona roa samihafa. Tezitra ny iray fa hoe nivalana ny fomba nihiran’ny ankilany azy ary dia tonga tamin’ny fikasihan-tànana. Nisy nampiasa antsy mihitsy ary dia nahafaty olona. Miisa efatra no nosamborin’ny polisin’ny BC momba ity raharaha ity ary natolotra ny fampanoavana omaly avokoa.